राजपाको आन्तरिक समस्याले एकीकरणमा ढिलाई – शिवजी यादव
अन्तर्वार्ता , राजनीति
राजपाको आन्तरिक समस्याले एकीकरणमा ढिलाई – शिवजी यादव शिवजी यादव
विनय ज्याेती शुक्रवार, आश्विन १०, २०७६, ०७:३५:०० मा प्रकाशित
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) र समाजवादी पार्टी नेपालबीच एकताको चर्चा अहिले सेलाएको छ । पार्टी एकीकरणबारे मुख्य एजेण्डा बनाएर राजपा अध्यक्ष मण्डलको बैठकसमेत बस्यो । राजपाले न एकीकरणको निश्कर्ष निकाल्न सक्यो, न हुदैन भन्न सक्यो । तर दुवै पार्टी एकीकरणका लागि निरन्तर अनौपचारिक छलफलमा छन् ।
मधेशमा राम्रो जनमत रहेका 'दुई पार्टीबीचको एकीकरण कुन बिषयले रोकेको छ ?' मधेश राजनीतिको विविध बिषयमा जनतापाटीका संवाददाता विनय ज्योतीले समाजवादी पार्टीका नेता शिवजी यादवसंग कुराकानी गरेका छन् ।
सरकारमा हुनुहुन्छ तर संविधान दिवस मनाउनु भएन । कारण ?
संविधान दिवसको बिषयमा पार्टीमा छलफल भयो । धेरै नेता कार्यकर्ताको राय बाँझिएपछि सो निर्णय भएको हो । सरकारसंग सत्तामा पनि रहेको र सम्झौता अनुसार संशोधन हुन बाँकी रहेकाले संविधान दिवस नमनाउने निर्णय भएको हो ।
नेकपा र कांग्रेस उपनिर्वाचनलाई लिएर तयारीमा जुटेका छन् । तपाईको पार्टीले के तयारी गरेको छ ?
निर्वाचन आयोगले कसरी काम अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरा मुख्य हो । सत्ताको नेतृत्वकर्ता पक्ष र प्रतिपक्षको नजर उप निर्वाचनमा देखिनु स्वभाविक हो । तर अन्य दलले समेत तयारी गरेका छन् । राष्ट्रिय र क्षेत्रीय दलमा नपरेका तर निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै साना दलहरु समेत हौसिएर दल दर्ता गराएका छन् ।
तपाईहरुले संविधान दिवस मनाउन अस्विकार गर्नुभयो । सैद्वान्तिक रुपमा मिल्छ ?
मुख्य मुद्दा संविधान संशोधनको हो । जनताबाट म्यान्डेड प्राप्त भएर आइसकेपछि संशाधनको काम गर्ने हो । तर डेढ वर्ष भैसक्दा पनि संविधान संशोधनको काम हुन सकेको छैन ।
हामी सत्तामा भएर, सत्ता पक्षको कुरा बुझिराखेका छौं । कुनै पक्षबाट सानोतिनो गल्ती नहोस, जसले गर्दा जनता भड्कियोस । त्यसैले सबैलाई समेट्दै संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने हो । यसैका आधारमा अन्य दलसँग बार्ता गरिरहेका छौ ।
नयाँ शक्ति पार्टीले आफूलाई बैकल्पिक पार्टी भनिरहेको थियो । समायोजन पछि उसले वैकल्पिक शक्ति दाबी गर्न छाड्यो । के नयाँ पार्टी आफुलाई बैकल्पिक शक्ति मान्न तयार छ ?
पार्टी बैकल्पिक हुँदैन । अरु बिषय थाहा भएन । सिद्धान्तका हिसाबले राजनीतिक दल एक पार्टी हुन्छ । सिद्धान्तका हिसाबले कुनै पार्टी बैकल्पिक हुँदैन । बरु पार्टीहरु छान्ने बेलामा जनताले एक पार्टीको बिकल्पमा अर्को छान्न सक्छन् । चुनावमा मानिसले इच्छा अनुसार कुन दलको बिकल्पमा कुन दलमा भोट हाल्ने भन्ने हो । तर कुनै पार्टीको बिकल्प कुनै पार्टी हुँदैन । त्यो विचारसँग म सहमत छैन ।
सरकार र प्रतिपक्षको राम्रो साथ पाएको समाजवादी पार्टीलाई संविधान संशोधन गर्न किन गाह्रो परेको हो ?
समाजवादी पार्टी बन्नु अघि नयाँ शक्ति पार्टी प्रतिपक्षमा थियो । संघिय समाजवादी पार्टी सरकारमा थियो । अहिले केही ठाउँ बाहेक केन्द्र लगायतका विभिन्न ठाउँमा पार्टी एकीकरण भैसक्यो । त्यसैले अब संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर दशैपछि अगाडी आउँछौं । पार्टीको तर्फबाट दशंैतिहार पछि निर्णय गरेर सरकारलाई धारणा प्रस्तुत गछौ ।
सरकार संविधान संशोधनमा तयार नभए तपाईहरु सत्ता छाड्न तयार हो ?
हामी सत्ता छोड्न तयार छौं । सत्तामा बसिरहन आएको होइनौं । हामी मुद्दालाई सम्बोधन गर्न आएका हौ । अहिलेको विषय संशोधन हो ।
प्रधानमन्त्रीले दशैंतिहारपछि मन्त्रीमण्डल फेर्ने चर्चा छ । समाजवादी पार्टी समेत सत्ता छाड्ने तयारीमा रहेको जनाउ दिन्छ ।सरकार र समाजवादी पार्टीबीच केही सहमती बनेको हो ?
होइन, यो तर सरकारको नेतृत्व गर्ने दलसँग सोध्नुहोस् । मन्त्री परिवर्तन गर्ने–नगर्ने प्रधानमन्त्रीले हो । तर दुई कुरालाई जोड्न मिल्दैन् । हाम्रो दलसँग मन्त्रीमण्डल हेरफेरको कुनै साइनो छैन ।
विचार र एजेण्डाका हिसावले राजपा र समाजवादी पार्टीबीच धेरै मतभिन्नता देखिदैन । तर पार्टी एकीकरणमा परेको गाँठो कहाँ हो ?
दुुवै पार्टीका नेताको अनुहार मिल्छ । भुगोल एकै हो । त्यो हिसाबले एक भैहाल्छ भन्ने लागेको होला । तर अनुहार एक हुदैमा पार्टी एक हुदैन । अनुहारले एक भएपनि व्यवहारले फरक छौं । पहिले पनि दुवै दल विचारले अलग भएका हुन् । समाजवादी पार्टी र राजपाको शासकीय स्वरुपनै फरक छ । भिन्नता यही छ ।
पहिले कांग्रेस र एमालेले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि चाहेका थिए तर सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको सवालमा समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवैको संसद गठन गरियो । तत्कालिन माओवादी केन्द्र पनि प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा थियो । तत्कालिन एमाले समेत प्रधानमन्त्री सिधै चुन्ने र राष्ट्रपति संवैधानिक राख्ने बिषयको नजिक थियो । त्यो मोटामोटी प्रत्यक्ष प्रणाली जस्तै थियो । जनता पार्टी अहिले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको सवालमा केही लचक देखिएको छ ।
के अब कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली जनताले स्विकार गर्लान् ?
जनताले नमान्ने भन्ने हुँदैन । हामीले प्रस्ताव दिन्छौ । जनताले अनुमोदन गरे भने त्यो सफल बन्छ । हामी र नेकपा मिलेर संविधान संशोधन गर्न तयार भयौं भने यो असंम्भव समेत छैन ।
राजपाले कार्यकारी राष्ट्रपतिमा सहमत भए, तपाईहरु एकतालाई तयार भन्न खोज्नुभएको हो ?
एकीकरणका लागि चुरो कुरा यही हो, जसमा छलफल भैरहेको छ ।
जुन दिन नयाँ शक्ति र संघिय समाजवादी फोरम एकता भयो, त्यो भन्दा एक दिन अगाडी राजपाका नेता आएर केही दिन पर्खिदिनुहोस्, हामी सबै मिलेर एकिकृत पार्टी घोषणा गरौं भन्ने खालको मनसाय व्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यसले धेरै कुरा मिलेको आभास हुन्छ । केही प्राविधिक कुरा मात्र नमिलेको हो ।
राजपामा नेतृत्वभित्रको जुन आफ्नो समस्या छ । समायोजन गर्ने बेलामा नेताको समेत वरियताक्रम मिलाएर जान पर्ने हुन्छ । राजपाको आन्तरिक समस्याका कारण एकीकरणमा ढिलो भएको हो । बर्षौसम्म अध्यक्ष मण्डल बनाएर बस्नु समस्याको कुरा हो । महाधिवेशन गराएर नेतृत्वको वरियता बनाउनु राजपाका लागि ठुला कुरा हो । त्यही गर्न सकिरहेको छैन । यसले राजपा समस्या छ भन्ने बुझिन्छ ।
दुवै पार्टीको हालको अध्यक्षको संख्या जोड्दा ८ पुग्छ । समायोजन गरियो भने एकजना अध्यक्ष बन्नु पर्ने हुन्छ । राजपाका अध्यक्षहरु तल पर्ने डरले एकीकरणमा नआएका हुन् कि ?
यो सतही विश्लेषण मात्र भयो । नेतृत्वले जनताबाट आदर पाएको छ/छैन भन्ने ठूलो कुरा हो । जसरी गणेशमान सिंहको उदाहरण दिन सकिन्छ । गणेशमान कहिल्यै पार्टीको अध्यक्ष भएनन्, तर सर्वमान्य नेता भए । पार्टीमा अध्यक्ष एउटा हुन्छ तर पार्टीमा मान सम्मान अर्को नेताले पाउँछ ।
तर राजपामा माझिएका र बुझेका नेताहरु हुनुहुन्छ । तर जसले पार्टीलाई अगाडी बढाउन सक्छ, उसले नेतृत्व पाउँछ । त्यसमा उपेन्द्रजी सक्षम देखिँदै आउनु भएको हो । समायोजनको बेलामा कसको नेतृत्व भन्ने बिषय प्रणालीले चयन गर्ने कुरा हो । तर प्रष्ट कुरा अब एकीकरण भएपछि अध्यक्षमण्डल भन्ने हुदैन ।
‘हल्ट प्राइज’ – जलवायु परिवर्तनविरुद्धको आन्दोलन पछिल्लो समय दुई कुराले विश्व तातेको छ । पहिलो – क्लाइमेट चेन्ज । दोस्रो – ‘क्लाइमेट चेन्ज’विरुद्धको शसक्त आवाज । ‘ग्लोबल वार्मिङ’ नामले विश्वमा चर्चा पाएको जलवायू परिवर्तन सम्बन्धि धारणा पछि ‘क्लाइमेट चेन्ज’ नामाकरण गरिएको थियो जसको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगातार विरोध गरिरहे । आइतवार, आश्विन १२, २०७६, ०८:२८:००
एसईई पछि के बन्न कुन विषय पढ्ने ? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिएको एसईइ परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएपछि अहिले विद्यार्थीहरु आफ्नो ग्रेड अनुसारको उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि धाइरहेका छन् । कतिपयलाई भने कुन ग्रेस ल्याएपछि के पढ्न पाइन्छ ? एसईई पछि के गर्ने भन्ने समस्याले सताएको छ । बिहिवार, असार १९, २०७६, ०९:१६:००
समताको समिक्षा – सामाजिक विकृति विरुद्ध आवेग सामाजिक कार्यहरुमा निरन्तर सकृय कवि तथा गजलकार तुलसी प्रसाद भट्टराईले आफ्नो दुई कृति भर्खरै बजारमा ल्याएका छन् । समाजिक विसंगती र कुरीतिलाई पेचिलो व्यङ्ग्यमा ढालिएको शस्त्रीय प्रमाणसहितको सुरम्य रचना उनका कृतिहरु ‘गजल मञ्जरी’ र ‘समता’मा पढ्न पाईन्छ । ‘गजल मञ्जरी’ गजल संग्रह हो भने ‘समता’ खण्डकाव्य हो । बुधवार, आश्विन ८, २०७६, ०७:३४:००